TTSweet: ဟင်းအိုး Alarm တဲ့ဗျား ...
Posted by T T Sweet at 11:25 AM
မိုက်တယ်ကွာ အဒေါ်ကြီးတို.ခေတ် ဟင်းချက်တာက။
(ဟင်းအိုး အမြဲတူးသူ လီယို)
susu February 2, 2012 at 4:06 PM
Vista February 2, 2012 at 4:19 PM
ဟုတ်ပ မဆွီရေ စလုံးမှာတော. ကျမလဲမတူးဘူး ရုံးကပြန်လာ မြန်မြန်လေး ကြော်ချက်စားဆိုတော. အချိန်ကြာကြာချက်ရမှာတွေလဲ မချက်ဖြစ်ဘူးလေ ပြီးတော. စလုံးက အသားတွေက အကျက်မြန်တယ်နော် ရေခဲရိုက်လို.လား မသိပါဘူး
phomu February 2, 2012 at 11:45 PM
phomu February 2, 2012 at 11:46 PM
အခုမှ အကြံရပြီ အမလို alarm လုပ်ပြီး ချက်မှဘဲ ဟင်းအိုး ခဏခဏ တူးတတ်တယ်လေ ကျေးဇူးဘဲ :)
phomu February 2, 2012 at 11:48 PM
ရှေ့တခုက စာလုံးပေါင်းမှား ရေးလိုက်လို့ ဖျက်လိုက်တာ :)
San San Htun February 3, 2012 at 10:30 AM
တူးတာတော့ မပြောနဲ့ တော့ တီဆွိရေ..တီဆွိ အကြံလေးက ပိုင်သဗျား...
မနက်အိပ်ရာထဖို့ ဘာလုပ်ဖို့ ညာလုပ်ဖို့ဆိုပြီး ပေးထားလိုက်ရတဲ့ အလန်းတွေများလွန်းလို့း)း) ဖုန်းကိုတောင်သနားမိတယ်
mae February 4, 2012 at 3:55 AM
rice cooker နဲ့ ချက်ကြည့်ပါလား အမ.. တူးတော့ဘူး
ကြာကြာချက်ချင်တဲ့ ဟင်းဆို rice cooker နဲ့ ချက်လိုက်ရင် ရေခန်းရင် သူ့အလိုလို ပိတ်သွားတော့ မပူရတော့ဘူး
ခင်မင်းဇော် February 6, 2012 at 12:34 AM
ကြက်ဥပြုတ်တာတောင် တူးဖူးတယ်။ ဘလော့ခေတ်ဦး ဘလော့အဖတ်ကောင်းတုန်းက။
mstint February 6, 2012 at 3:07 PM
အသည်းအသန်ပြန်ပြေးတဲ့ ဆွိတီရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ယောင်မိတယ်း)
ဟင်းအိုးတူးတာကိုတော့ ဟင်းချက်တဲ့ဘလော့ဂါတိုင်း ကြုံဘူးမယ်ထင်ပါတယ်း)
သက်ဝေ February 12, 2012 at 3:01 PM
Blogging တို့ Facebook တို့ လုပ်နေရင် အရာရာ မေ့တဲ့ဘဝ alarm ပေးဖို့ကိုပါ မေ့တာဗျား...း(